Uninzi lweempapasho kwiphepha lezokwelapha I-Annals ye-Internal Medicine, ezinikezelwe kwizifundo zoluncedo lwabantu abasebenzisa iivithamini kunye neemaminerali ezipapashwa kakhulu, zingakwazi ukuphula isithethe esilungileyo sokugcina ubungqina ngokusetyenziswa kweemveliso ezahlukeneyo ze-pharmacologic kwiinkalo ze-multivitamines kunye neemaminerali. Iingcali zenzululwazi zithi zonke iintlobo zamavithamini kunye nezongezelelo, ezibekwa kuthi, azizuzisi. Ama-multivitamine awanciphisi umngcipheko womhlaza okanye umngcipheko wesifo senhliziyo. Uphando lwaphando lubonise ukuba ukucinga kweemfundiso zeNobel Prize winner uDkt Linus Pauling, wabuyela kwiminyaka yama-70 yekhulu lokugqibela, apho impembelelo ye-vitamin C ekukhuseleni i-influenza okanye kubanda kwakubhengezwe ngokubanzi, yinto engafanelekanga. Ngokufanayo, izilingo ezingapheliyo zamaqela amaninzi zezigulane, xa elinye iqela lithatha izongezo, elinye liyaneliswa yi-placebo, alizange libonise ukuba i-antioxidants ikhusela umhlaza.
Akukho mntu uxela ukuba umzimba wethu udinga iivithamini. Kufuneka ukuba ukhumbule imbali edabukisayo yeemkhankaso zikaMagellan, xa iziqwenga zeemikhumbi ziyakunqwenela ukutshatyalaliswa kwezinto ezifumeneyo. Kwaye ngekhulu lama-21, uninzi lwabantu basekuhlaleni lukhutshwe nje ngokusetyenziswa kwabo. Ngenxa yoko, ukutya rhoqo kwamavithamini, ngakumbi iivithamini A, C no-E, kunye ne-beta-carotene, ngeendlela ezahlukeneyo, kunokunobungozi, ukwandisa umngcipheko wesifo kunye nomnye izifo ngenxa yokuhluthwa ngokweqile kwama-antioxidants emzimbeni. Abaphandi banokuqiniseka ukuba isininzi samavithamini kunye nesongezelelo samaminerali asinakulungele ukuvuyisa okubangele kuzo. "Ixesha lokuyeka ukuchitha imali kwiivithamini kunye nezongezelelo zeemaminerali ngaphandle kwemiphumo!" - ichazwe ngokucacileyo kwinqaku elipapashwe kweli phephancwadi. Ngakolunye uhlangothi, uphando lweengcali zenzululwazi ziye zazimisela ukusetyenziswa kwamavithamini athile kunye neemaminerali, ezicetyiswayo zokusetyenziswa kunye neqondo elithile lokungathemba. Le yile "nkwenkwezi" ezintlanu.
Kuzo zonke iivithamini eziye zenziwa "zifundo zakudala", ezifunyenwe phakathi kowe-1913 no-1941 kwaye zibizwa ngokuba ngamavithamini A, B, C, njalo njalo, i-vitamin D iyona ndlela iphumelele kakhulu ukuyiphakamisa njenge-supplementary vitamin. Iziphumo ze-metaanalysis (i-metaanalysis - njengokwesiko namhlanje ukubiza ukuhlanganiswa kweziphumo zophando ezinikelwe ekufundweni kwenkalo efanayo kodwa ziqhutywe ngeendlela ezahlukeneyo zokufunda) zeephando ezininzi eziqhutywe ngo-2008 no-2013 zibonise ukuba abantu abadala i-vitamin D isondeza imihla ngemihla, ihlala ixesha elide kunabo abangenalo. Kwaye kwaphawulwa ukuba abantwana abathabatha i-vitamin D babengenakukwazi ukufumana umkhuhlane, kwaye abantu asebekhulile bayomeleza amathambo abo, kwaye iziganeko zentsimbi zancipha. Iingcali zenzululwazi zange zange zikwazi ukuchaza indlela echaphazela ngayo i-vitamin D emzimbeni, kodwa iqinisekisa ukuba ingasetyenziswa ngokuncedisa ngokuqhubekayo.
Emzimbeni wethu, siphile iitriliyoni zeeseli ezinobungozi ezibandakanyekayo kwimimiselo yethu yempilo, kodwa ziza kutshabalalisa ngokukhawuleza kunye neyeza-antibiotics, ngaloo ndlela zixhaphaze inzondo engathandekiyo. Ngoko ke, kucetyiswa ukuba xa uthatha i-antibiotics, thabatha i-probiotiki ngendlela yezongezo okanye iimveliso ezifana ne-yoghurt, ngokwemvelo icebile kwiibhaktheriya, ukuze ubuyisele iikholoni zebhaktheriya ezonakalisiwe emathumbu. Uhlalutyo lwe-meta lwamacandelo ophando olwenziwa ngo-2012 lufumene ukuba ukusebenzisa i-probiotics kunciphisa kakhulu imvama yehudo emva kwekhosi ye-antibiotics. Kodwa ke ama-probiotics ayilona i-panacea yokutya, oogqirha abaqapheli ukusebenza kwabo kunyango lwezifo ezingapheliyo, umz. Njengamanye amanxeba angaphezulu, ayiluncedo kwiimeko ezizodwa, ngoko akufuneki ukuba kuthathwe imihla ngemihla.
Ukuthelekiswa ne-vitamin C, leyo, nangona iyaphilisa kubanda, kodwa ayenzi nto inokuyithintela (oko kukuthi, akukho prophylaxis), i-zinc ngendlela yokongeza iyakwazi ukwenza oku. Lo mbumbano uthatha inxaxheba kwimimandla eyahlukileyo ye-cell metabolism yethu, ukuphikisana nokuveliswa okungavinjelwe kweentsholongwane ezibangela iimpawu ezibandayo. Uphando oluninzi lwezokwelapha luye lwaqinisekisa ukuba ukuthatha i-zinc kuya kunceda ukumelana nokubandayo, kwaye iimpawu ngokwazo ziba nzima kakhulu. Ngoko ke, ukuba unomuzwa wokuthi iibanda azikwazi ukunqandwa, ungagqithwa ngokugqithiseleyo kwe-vitamin C, kwaye ngokukhawuleza uthathe ipilisi ene-zinc.
I-Niacin, eyaziwa nangokuthi yi-vitamin B3, isandul 'ukutshiwo njengento yokunyanga kuzo zonke izifo (kuquka i-cholesterol ephezulu, i-Alzheimer's, isifo sikashukela kunye nentloko), njengoko iziphumo ezimangalisayo ziboniswe kwizifundo. Ukuphononongwa kweengxelo ze-2010 kubonise ukuba ukungena kwimihla ngemihla kunciphisa umonakalo wesifo okanye isifo senhliziyo kwi "cores", ngaloo ndlela ukunciphisa ingozi yabo yonke yokufa ngenxa yeengxaki zomzimba.
Naba bakhe abachasayo abavela kwi-"Annals of Medicine Internal" ngokuqinisekileyo babhekiswe kwisixhobo esisebenzayo sokunyanga kwengcinezelo yegazi kwaye ikhuthazwa kakhulu ukuba ithathe ifom. Ithetha ukuthini: udle igalikhi! Kuzo zonke izifundo eziqhutywe ngo-2008, emva kokuthelekiswa kweziphumo, ukunciphisa uxinzelelo lwegazi kwafunyanwa ngabo babenomfutho wegazi ophezulu ekuqaleni kwetyala. Konke kuya kuba kuhle, kodwa abaninzi abafazi banokucaca ngokucacileyo ukuba igallic ngenxa yephunga layo elithile.
Iipropati ezisetyenziswayo zamapheya
Ukuba ufuna ukuphumla, ngoko unokuziphucula njani?
Isidlo se-Cheese kwi-Rapid Weight Loss
Ukutya kwesifo sikashukela, yintoni esinokuyidla kwaye ayikwazi ukuyidla?
Ilayisi kunye neepasta kunye neepilisi ezinomnandi
Ukusetyenziswa kwamakhowe, iimpawu zonyango
"Umhlophe" isaladi nenyosi yenkukhu
UJulia Vysotskaya kwi-swimsuit xa kuthelekiswa noAnastasia Volochkova